Tallaadadii kulamadii dhacay England Premier League - BBC News Somali
Tallaadadii kulamadii dhacay England Premier League
Abdirahman Koronto BBCSomali.com
5 Jannaayo 2011
Ilaa Sadex kulan oo ka tirsan cayaaraha England Premier League, ayaa xalay qabsoomay.
Blackpool waxaa marti u ahayd kooxda Birminghm, halka Fulham ay u timid kooxda West Brom.
Manchester United waxay dhinaceeda martigalisay kooxda Stoke.
Sadexda cayaaroodba waa lagu kala adkaaday. Waxay kooxuhu kala matalayeen dhamaan heerarka liiska dhinaca kala horaynta dhibcaha, qaybta ugu saraysa kuwa dhexe iyo kuwa ugu hooseeya.
Kooxda Manchester United oo ugu saraysa liiska, waxay Kooxda Stoke kaga adkaatay 2-1.
Goolka waxaa ku hormaray kooxda Man U oo daqiiqadii 27-aad uu cayaaryahanka Hernandez gool ku hubsaday shabaqa kooxda Stoke.
Cayaarta oo 1-0 lagu kala nastay ayaa markii dib la isugu soo laabtay shan daqiiqo kadibba ay kooxda Stoke uu kubad uu madaxa la helay Dean Whitehead uu dabamariyay goolhayaha Man U Tomasz Kuszczak. Sidaasna ay cayaartu ku noqotay 1-1.
Hase yeeshee, Manchester United oo u muuqatay in ay ka go'nayd in aysan iska dayicin fursadda ay u haysatay in ay 3 dhibcood ka hormartay kooxda ku soo xigtay dhinaca dhibcaha ee Man City, ayaa ilaa 11 daqiiqo kadib uu kubad uu ka helay diilinta gool ku laadka ama rigooraha cayaaryahanka Luis Nani uu shabaqa ka dhigay geeska bidixda ah.
Machester United 2-1 ayaa ku badisay.
Waxay yeelanaysaa 44 dhibcood, Man City oo ku soo xigta waxay leedahay 41, waxayna caawa garoonka Emirates kula cayaaraysaa kooxda Arsenal oo iyada ka hoosaysa laba dhibcood oo leh 39. Waa cayaar xiiso leh, iyadoo Man City ay doonayso in aysan ka harin Man U, halka Arsenal uu qorshaheeda yahay in aysan dib uga dhicin tartanka iyadoo fursad u haysata in ay noqoto kooxda labaad hadii ay ka badiso Man City.
Fulham iyo West Brom, oo labaduba ka cararaya qadka hoose ee kooxuhu tartanka Premier League looga saaro oo ah sadexda boos ee ugu hoosaysa, ayaa isku helay garoonka kooxda Fulham.
Fulham, ayaa goolal badan kaga badisay West Brom.
Waxay Fulham ku adkaatay 3-0.
Waxaa goolasha u kala dhaliyay Simon Davies oo waqtiga dheeraadka ah ee lagu daray qaybta horay fursad u helay in uu kubadda dhinaca kore ee midigta shabaqa kaga xareeyo.
Markii qaybta labaad lagu soo laabtay, ayaa Cliton Dempsey uu goolka labaad ee Fulham madaxa ku dhaliyay.
Waxaase kooxda West Brom sii quusiyay cayaaryahanka Fulham Brede Hangeland oo meel goolka u dhow kubadda madaxa la helay, oo ku hubsaday shabaqa.
Waxay cayaarta ku dhamaatay 3-0 ay ku guulaysatay kooxda Fulham.
Fulham waxay hadda noqonaysaa kooxda 13-aad dhinaca liiska kala horaynta dhibcaha iyadoo leh 22 dhibcood, waxay siman yihiin dhinaca dhibcaha kooxaha Everton, Birminghm, West Brom, Aston Villa ayaa hal dhibic oo kaliya ka hoosysa kooxahan iyadoo west Ham iyo Wigan oo ka mid ah sadexda ugu hoosaysa ay leeyihiin min labaatan, ayaa Wolves oo liiska ugu wada hoosaysa ay leedahay 18 dhibcood.
Birminghman cayaarteedii waxay 2-1 kaga badisay kooxda Blackpool, oo ah koox kala barka taagan lehna 25 dhibcood, iyadoo ah kooxda 11-aad liiska dhibcaha.
Caawa cayaaraha la sugayo waxaa ka mid ah Arsenal oo la cayaaraysa Man City.
Aston Villa waxay kulmayaan Sunderland, Newcastle iyo West Ham ayaa is arkaya, Wolverhampton waxaa u imanaya kooxda Chelsea, Blackburn iyo Liverpool way wada cayaarayaan, Bolton ayaa martigalinaysa Wigan, Evertonna waxay gurigeeda ku qaabilaysaa kooxda Tottenham.
Natiijooyinka cayaarahan ayaa wax badan ka badali doono tartanka dhinaca dhibcaha.
Dhinaca gooldhalinta cayaaryahanka Berbatov ee kooxda Man U ayaa 14 dhibcood ku horkacaya gooldhaliyayaasha, Tevez oo Man City ah wuxuu leeyahay 12, Carroll oo u dheela Newcastle ayaa ah gooldhaliyaha sadexaad oo dhaliyay 11 gool.